Eric Fou Hehy : Efa lasa any Inde hiatrika ny fandidiana azy -
AccueilSosialyEric Fou Hehy : Efa lasa any Inde hiatrika ny fandidiana azy
10/07/2018 admintriatra Sosialy 0
Ny erikerika nahatondra-drano. Na teo aza ny fahasahiranana, efa lasa any Inde hiatrika ny fandidiana azy i Eric Fou Hehy. Ny aretin’ny voa, raha tsiahivina no nahavoa azy, ary tsy maitsy ny fanoloana azy no vahaolana farany. Taorian’ny antso avo nataon’ity mpanakanto eo amin’ny sehatry ny hatsikana ity dia maro ireo namaly ny antso, ary nisy ireo namana akaiky nitondra ny anjara birikiny tamin’ny fanohanana azy ka nandray ny ampahany betsaka amin’ny saran’ny fitsaboana.
Manodidina ny 30 000 Dolara na manodidina ny 99 000 000 Ar ny saran’ny fitsaboana notadiavina entin’i Eric tamin’izao fitsaboana izao. Saran’ny fitsaboana fotsiny anefa io fa mbola ankoatra io ny saran’ny fijanonana any. Niara-dia amin’i Eric nihazo an’i Inde ny vadiny. « Maneho fisaorana feno anareo nanampy ahy ahafahako manatanteraka ny fitsaboana any am-pita, indrindra ireo nanampy ara-kevitra, ara-tsaina, ara-bola, ireo nitondra am-bavaka sy nankahery. Ilay Andriamanitra manankarem-pahasoavana anie hamaly fitia anareo », araka ny fampitan-kafatra avy amin’i Eric tamin’ny kaonty Facebook-ny. « Misaotra ihany koa ho an’ireo niezaka nanenjika nanaraby, naneso, nanary loza, nanao teny maharary… Tsy misy alahelo fa mirary soa ho anareo », hoy hatrany izy.
Efa hatramin’ny volana mey no niditra hopitaly, ary niatrika fitsaboana tetsy amin’ny HJRA Ampefiloha i Eric. Na tao anatin’ny tsy fahasalamana aza, dia tamin’ny endrika feno tsiky, toa ny nahafantarana azy hatramin’izay no nentin’i Eric nihazo an’i Inde hanaovana ny famindrana voa. Miray soa sy fahasalamana ho azy.
Nivahiny tao amin’ny TV Plus ny filohan’ny Holafitry ny Mpisolovava, Hubert Raharison. Adihevitra manodidina ny tontolon’ny Fitsarana, ny asa sy ny andraikitry ny Mpisolovava no nivoitra nandritra izany. Voaresaka manokana nandritra io fandaharana manokana io ...Tohiny